Sheekooyinka Sketching: Isku -xidhka Sawirka ee Sheekooyinka Hore - U -Diritaanka
Sheekooyinka Sawiridda: Isku -xidhka Sawirka ee Sheekooyinka Hore
UnCommission -ka ayaa isu keenaya boqolaal dhallinyaro ah oo ku nool waddanka oo dhan si ay khibradooda shaqsiyeed ula wadaagaan sayniska, injineernimada, farsamada iyo barashada xisaabta si ay gacan uga geystaan ​​qaabaynta mustaqbalka waxbarashada STEM. Waxaa sharaf noo ah in ku dhawaad ​​200 oo dhallinyaro ah ay doorteen inay nala wadaagaan sheekadooda STEM illaa hadda.
Waanu ku faraxsanahay inaan wadaagno sawir sawir leh oo farshaxan Emily Jane Steinberg qaar ka mid ah sheekooyinkii hore ee aan helnay. Sheekooyinka lagu muujiyey sawirkan waa dhalinyaro ka soo jeeda bulshooyinka aadka looga saaray waxbarashada STEM, oo ay ku jiraan Black, Latinx/Hispanic, iyo bulshooyinka Maraykanka u dhashay, iyo waayo-aragnimadooda aan udub dhexaad u nahay habkan. Si kastaba ha ahaatee, kuwan sheeko-yaqaannada ah, si kastaba ha ahaatee, waa shakhsiyaad gaar ah oo leh waayo-aragnimo iyaga u gaar ah iyo aragtiyo ku saabsan barashada STEM. Sheekooyinka ku jira sawirkan waxay ka dhigan yihiin waayo-aragnimo ballaadhan oo ay dhallinyaradu ku yeelan karaan socdaalkooda waxbarashada STEM oo u dhexeeya xiiso, farxad, iyo raynrayn ilaa cabsigelin, naxariisdarro, iyo xitaa mararka qaarkood takoorid. Marar badan, qaar badan oo ka mid ah waaya-aragnimadan iyo shucuurtan kala duwan waxay ku soo baxaan sheeko isku mid ah.
Waxaan sii wadi doonnaa soo uruurinta sheekooyinka illaa Oktoobar 15, 2021. Miyaad tahay (ama ma taqaan) qof dhallinyaro ah oo raba inuu la wadaago waayo -aragnimadooda dhabta ah ee barashada STEM -ka Mareykanka? Baro sida loo wadaago sheekadaada halkan. Dhammaan sheekooyinka waxay heli doonaan xiriir si ay u doortaan hadiyad qiimaheedu yahay $ 25 mahadnaq.
Akhri sheekooyinka ku matala sawirkan:
"Aqoonsiga Wakiilnimada" ee Arsima
"Sheekada Denise 12-K" ee Denise
“STEM Waxeey Bedeshay Waxbarashadeydii” Waxaa qoray Brandon
"Sheekada Renee" ee uu qoray Renee
"Sida barashada dhabta ah ay u wanaajin karto ka-qaybgalka ardayda STEM" ee Rhea
"Sheekada Dani" waxaa qoray Daniela
(Xusuusin: Sawirkan wuxuu ku salaysan yahay fasiraadda fanaanka ee qoraallada badan ee sheekooyinka
loomana jeedo inuu yahay sawir -qaade sheeko -yaqaan kasta.)
su'aal ma qabtaa? Iimayl unCommission@100Kin10.org